IBUDATA BỌTA MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2020
Ndagharị vidiyo bụ usoro na-ewu ewu nke na-enye gị ohere ịmegharị otu usoro vidio ọzọ. A na-ejikarị usoro a eme ihe mgbe ngwaọrụ ma ọ bụ ọkpụkpọ akwadoghị usoro vidiyo ị nwere, ya mere ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya iji tọghata ya na onye ọzọ. Usoro mmemme ndị ọzọ nwere ike inye aka na nke a.
Taa, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-emegharị ihe ntanetị na-enye gị ohere ọ bụghị nanị iji tọghata otu usoro gaa na ọzọ, ma na-enyekwa gị ohere ịrụ ọrụ ndị ọzọ na ụda na vidiyo.
Usoro mmemme maka ntụgharịgharị vidiyo, ikwe ka ọ bụghị nanị na-arụ ọrụ na usoro ọdịyo na usoro vidio, kamakwa igosipụta ntughari vidio kpọmkwem maka ngwaọrụ mkpanaka, n'ụzọ zuru ezu ịhazi usoro na mkpebi.
A na-eji usoro interface enyi na-akwado ihe omume ahụ na nkwado nke asụsụ Russian, a na-ekesa ya kpam kpam n'efu.
Download usoro mmepụta Ụlọ ọrụ
N'adịghị ka usoro ntọala, ihe ngwọta a nwere ọtụtụ ihe ọkaibe karị na nke oge a, nke zuru oke na-arụ ọrụ.
Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ọ bụghị nanị iji tọghata vidiyo ahụ na usoro chọrọ, kamakwa iji mee nhazi vidio dị mfe, nke gụnyere agụnye, ntụgharị na ihe ndị ọzọ.
Okwesiri iburu n'uche na ihe omume a nwere nsonaazụ n'efu, nke zuru ezu iji rụọ ọrụ niile metụtara converting.
Movavi Video Ihe Ntụgharị
Ọ bụghị nnwere onwe n'efu, kama ọ bụ ọrụ ngwọta, ọrụ bụ isi bụ iji tọghata vidio, mana nke a abụghị naanị ohere nke usoro a.
Movavi Video Converter nwere interface dị mma, nnukwu set nke usoro mgbasa ozi akwadoro, na-enye gị ohere ịhazi vidiyo, ịmepụta trimming, mgbazi agba, ederede na akara mmiri, wdg. Iji hụ na arụmọrụ na ngosipụta nke ngwá ọrụ a, ndị mmepe nyere oge ikpe-azụ n'efu .
Ọ bụrụ na ngwá ọrụ niile a kpọtụrụ aha n'elu bụ ndị ntụgharị na ọbụna ndị ọrụ kọmputa ọhụụ ga-achọpụta na ọ dị mma iji rụọ ọrụ, mgbe ahụ, usoro a bụ ngwá ọrụ ọkachamara, ma na-enye ọtụtụ ntinye ọma nke vidiyo maka ntụgharị uche dị elu.
Ihe omume dị irè maka ịtụgharị video gaa AVI na usoro ndị ọzọ. Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere iji tọghata vidiyo (otu ma ọ bụ vidiyo dum n'otu oge), usoro, mepụta ihe nkiri slide, tọghata 2D ka 3D na ndị ọzọ.
N'agbanyeghị enweghi nkwado maka asụsụ Russian, usoro ihe omume a dị mfe ma dị mfe iji rụọ ọrụ, ọrụ dị elu ga-enye gị ohere iji dochie ọtụtụ mmemme ozugbo.
Ihe ọ bụla Video Converter Free
Ikekwe ihe omume a bụ nhọrọ kacha mma maka ịgbanye vidiyo iji mee ka ị nwee ike ịlele maka elekere anya na ngwaọrụ mkpanaka.
Ihe omume a na-anakọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ niile dị - mbadamba, smartphones, ọkpụkpọ, consoles egwuregwu, wdg. Iji mee ka vidiyo dị maka ngwaọrụ gị, họrọ ya site na ndepụta buru ibu, mgbe nke a gasịrị, usoro ihe omume ahụ ga-ahọrọ ihe niile dị mkpa.
N'ime atụmatụ ndị ọzọ nke usoro ihe omume ahụ bụ inye mkpokọta osisi, iwepụta vidiyo, iji mmetụta, mgbazi agba na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe omumu: Otu esi emeghari vidio n'ime usoro ihe omume a
Hamster Free Video Ihe Ntụgharị
Otú ọ dị, ngwá ọrụ kachasị mfe, ọ bụghị dị ala na arụmọrụ ka ọ na-eme mgbanwe ọzọ.
A na-ewu usoro ihe omume ahụ nke ọma - a na - ekewa ọrụ niile n'ime ụzọ atọ, nke ịchọrọ ịgbakwunye vidiyo, kpebie usoro, wee gaa n'ihu na ntughari.
Hamster Free Video Converter bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya kpamkpam ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị vidiyo, mana echeghị itinye oge n'ịmụta interface na atụmatụ nke usoro ihe omume ahụ.
IWisoft Free Video Ihe Ntụgharị
iWisoft Free Video Converter bụ mmemme zuru oke maka ịgbanwere vidiyo gaa na MP4 na usoro ndị ọzọ, nke na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu atụmatụ dị iche iche dịka ndị na-akwụ ụgwọ - ịgbanwere vidiyo gaa n'ụdị dị iche iche, edezi vidio, na ike ịgbanye nhazi, na vidiyo nwere ike ịtụgharị ma na nchịkọta nhọrọ ọ bụla, yana dị iche iche.
Nanị usoro ihe omume a bụ enweghị asụsụ Russian, ma e mepụtara usoro ihe omume ahụ n'ụzọ na-enweghị ihe ọmụma nke asụsụ Bekee, ị nwere ike ịmalite ịmalite iji ọrụ nke usoro ahụ ngwa ngwa.
Download iWisoft Free Video Ihe Ntụgharị
AutoGK abụghị onye mgbagwoju anya, ebe ọ bụ A na-eme ya maka iji ya dị warara. Isi ya, ma eleghị anya naanị ọrụ - bụ iji tọghata DVD na AVI.
Ihe dị mkpa nke usoro ihe omume ahụ bụ na ọbụna chebe faịlụ DVD na-agbanwe nke ọma, na n'usoro ị nwere ohere ịhọrọ egwu egwu na ndepụta okwu ndị ga-esonye na vidiyo ọhụrụ ahụ. A na-ekesa ihe omume ahụ kpam kpam n'efu, ma, ọ dị mwute ikwu na ọ dịghị nkwado maka asụsụ Russian.
Download software AutoGK
Ihe omume a bụ ihe ntụgharị dị mfe nke na-ekpughere kpamkpam. Usoro ihe omume a nwere ọtụtụ ihe dị mma, dị ka foto na-adọrọ mmasị na vidio, na-agbanwe 2D na 3D, na-arụ ọrụ na ụda na ihe.
N'ikpeazụ, ọ dị mkpa ikwupụta okwu ole na ole gbasara ndị na - ejikọta ọnụ - Nero. Mana iji dokwuo anya, na nke a, anyị na-ekwu okwu banyere ihe dị iche iche nke ọrụ a, nke a na-akpọ Nero Recode.
Nero Recode nwere ọrụ abuo abuo: igbanwe DVD na Blu-ray, wepu oke nchedo site na ntaneti, yana igbanwe egwu na vidiyo na usoro di iche iche na vidiyo.
Na obere ngwụsị. Isiokwu a na-akọwa software kacha ewu ewu maka ịtụgharị. Anyị nwere olileanya, mgbe ị gụrụ ya, ị nwere ike ịchọta onwe gị usoro mmemme nke ị ga-arụ ọrụ gị.
https://termotools.com ig.termotools.com © Mmemme Nyocha 2020